We Fight We Win. -- " More than Media ": တရုပ်တွေရဲ့ငွေ တူး လုပ်ငန်း ယဉ်ကျေးမှုတွေကို ဖျက်စီး
တရုပ်တွေရဲ့ငွေ တူး လုပ်ငန်း ယဉ်ကျေးမှုတွေကို ဖျက်စီး
May Zaw Khin shared Burma-Newselite's photo.
အာဖဂန်နစ်တန်က နှစ်ပေါင်း ၂ ထောင်သက်တန်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ ရှေးဟောင်း ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်နဲ့ ဗုဒ္ဓ သာသနိက အဆောက်အဦတွေကို တရုတ် သတ္တုတွင်းကုမ္ပဏီတွေ ဖျက်ဆီးနေသလား။
အမေရိကန်နိုင်ငံ Northwest University စာနယ်ဇင်းပညာဌာနက လက်ထောက် ပါမောက္ခလည်းဖြစ်၊ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးသူလည်းဖြစ်တဲ့ ဘရန့် ဟူ့ဖ်မန် (Brent Huffman) ဟာ လက်ရှိ အာဖဂန်နိုင်ငံ မက်စ်အိုင်နခ် မှာရှိတဲ့ တရုတ်အစိုးရပိုင် ကြေးနီသတ္တုတွင်းအကြောင်း မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးရေး လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
တန်ဖိုးအားဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်ထရီလီယံ
($1 trillion) လောက် အကျိုးအမြတ်ရနိုင်မယ့် ဒီ ကြေးနီသတ္တုတွင်းမှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ ရှေးဟောင်း ဗုဒ္ဒဘာသာ အဆောက်အဦးတွေကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဗုဒ္ဒရုပ်ပွားတော် ၂၀၀ ကျော်နဲ့ စေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ ပါရှိပါတယ်။
ဒီရှေးဟောင်း ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနိက အဆောက်အဦတွေရဲ့ ကံကြမ္မာ ဘယ်လို ဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲ။
ဘရန့်ဟူ့ဖ်မန် ရဲ့ မူရင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဆောင်းပါးကို ဆက်ဖတ်နိုင်အောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
နောက်ရက်တွေမှာ အချိန်ရရင် အပြည့်အစုံ ဘာသာပြန်ပေးပါမယ်။
Are Chinese Miners Destroyinga2,000-Year-Old Buddhist Site in Afghanistan?
(ဓာတ်ပုံ- Brent Huffman)
Chinese will go every where for the money, they are atheist(Communist), they don't care other religion.
On the other hand, if they don't go for the money, they cannot feed their population and then their country will broke into pieces.